အယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည် ကလူယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရကူညီပေးနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ကူညီပေးသည်။ ကျနော်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်အကူအညီရှာဖွေနေအလုပ်စီမံခန့်ခွဲရသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအယ်လ်ဂျီးရီးယားအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲလျှင်။ သင်ကယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အသစ်ကပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအောက်ပါနှင့်အတူလူကူညီပေးနေ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် အယ်လ်ဂျီးရီးယားသည်။ ကျနော်တို့လမ်းညွှန်အသေးစိတ်နှင့်အတူ, သငျသညျလကျကိုကူညီဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသူတို့လိမ့်မယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်အတူပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်စိတ်ဝင်စား။ အလုပ်၏အရည်အသွေးအများကြီးပိုကောင်းအယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှငျ့အတူရှိ၏။ အဆိုပါအလုပ်-based အယ်လ်ဂျီးရီးယားအတွက်လုပ်ခ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များ အယ်လ်ဂျီးရီးယားသည်များအတွက် ကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေး။ တစ်ကြီးထွားလာအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အယ်လ်ဂျီးရီးယား။ အယ်လ်ဂျီးရီးယားပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေရှည်ဘို့သွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ သငျတို့သသင့်ပါတယ် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားလုပ်သားများ ယူအေအီးအတွက်လူကြိုက်များ။ ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတွေကိုကူညီနေကြပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်ထဲမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သင်သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေဘို့နည်းလမ်းများစွာဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ပေးကမျး အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများများအတွက်အမှန်တကယ်ကိုကူညီပါလက် အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေ။ သူတို့ချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင် ဒူဘိုင်းမြို့နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အခြေချရန်.
ကျနော်တို့ရဲ့အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များစစ်ဆေးကြကုန်အံ့စတင်ခင်မှာ
အယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကျော်မခံမယူဖို့ကောင်းပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးအဖြစ်အယ်လ်ဂျီးရီးယား တိုင်းပြည်ကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ရွှေ့ခင်မှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူ အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေ။ သင်တစ်ဦးကြည့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားဘယ်လောက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ရှိသင့်ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားအဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကြီးဆုံးတိုင်းပြည် အာဖရိကရှိဧရိယာအားဖြင့်။
အဆိုပါဆာဟာရသဲကန္တာရရာခိုင်နှုန်း 80 ထက်ပိုမိုဖုံးလွှမ်း အံ့သြဖွယ်အယ်လ်ဂျီးရီးယား.
ကျော်သန်းအယ်လ်ဂျီးရီးယားစစ်သားတိုက်ခိုက်နေခြင်းနှင့် 1962 အတွက်ပြင်သစ်ထံမှလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်ပြိုလဲခဲ့သည်။
Hippo ၏စိန့်သြဂတ်စ (354-430) အပေါင်းတို့၏အကျော်ကြားဆုံးအယ်လ်ဂျီးရီးယားဖြစ်ခဲ့သည်။ Hippo ယခု Annaba ဖြစ်ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားငါးခုရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူး, 1964 ကတည်းကတိုင်းနွေရာသီအိုလံပစ်မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
သူတို့ကနှစ်ကြိမ်ယောက်ျားရဲ့အသီးအသီးအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများရဲ့ 1500 မီတာ။ အခြားတဦးတည်းလက်ဝှေ့များအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နိုဘယ်ဆုအနိုင်ရပြီအယ်လ်ဂျီးရီးယားမှာမွေးဖွားတစ်ခုတည်းသောကလူအဲလ်ဘတ်ကမူး (စာပေ 1957) နှင့် Claude Cohen ကို-Tannoudji (ရူပဗေဒ, 1997) တို့ဖြစ်သည်။
အစဉ်အဆက်အယ်လ်ဂျီးရီးယားတှငျမှတျတမျးတငျထားအမြင့်ဆုံးအပူချိန်သြဂုတ်လ 51 အတွက် 123.8C (2011F) ဖြစ်ခဲ့သည်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယား၏ကြီးထွားလာနံပါတ်များရှိပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိကျွမ်းကျင်သူများ 2009 ကတည်းက။
သူပြည်တော်ပြန်အများစုဟာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတှငျနထေိုငျ။ အခြို့သောကန့်သတ်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၏ကောင်စစ်ဝန်ရုံးယေဘုယျ ကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်စီမံခန့်ခွဲသင့်ပါတယ်။ အယ်လ်ဂျီးရီးယားအလုပ်သမားအကောင်းဆုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ သူတို့က ယူအေအီးအတွက်လူကြိုက်များန်ထမ်းများ၏တဦးတည်း။ ထိုအခါအခွန်လွတ်အလုပ်အကိုင်များမေတ္တာရှင်အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေလူတွေအများကြီးယူအေအီးကုမ္ပဏီများမှထံမှပေးထားပါတယ်။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကြီးသော!.
တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများဘဝ Duba နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်တကယ်ကောင်းလှ၏။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, အယ်လ်ဂျီးရီးယားယူအေအီးအတွေ့အကြုံအချို့ကိုမျိုးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းယေဘုယျအားအကောင်းဆုံးစကားပြောဖြစ်ပါတယ် လာမယ့်အလားအလာကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ရာအရပ်ကို။ သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိသစ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာလျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေအယ်လ်ဂျီးရီးယားအတွက်ထက်အများကြီးပိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းမှာတော့သင်ဟာအလုပ်ရှုပ်နိုက်ကလပ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တို့မူကားလိမ့်မည် ဝင်ငွေကောင်းတစ်ခုအရင်းအမြစ်ကျိန်းသေတွေ့ပါ။ သင့်ရဲ့ကလေးတွေနှင့်ကိုယ်အဘို့သင့်လျော်သောပညာရေးများအတွက်ထို့အပြင်ကောင်းသောကျောင်းများတွင်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရှိခြင်းသောပြည်တော်ပြန်အများစုဟာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အိန္ဒိယကနေကျော်လာ နှင့်ပါကစ္စတန်။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ အရေအတွက်များတဲ့အစသတိထားမိမှာ ဖိလစ်ပိုင်မှလူ နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းယခုအယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အနှိပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေကျွမ်းကျင်သူများအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရတဲ့နေကြသည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုဖြစ်ကြသည် အမ်းမရိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းအတော်လေးပျော်ရွှင်.
သငျသညျအယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲခြင်း အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ထို့အပြင် အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့်အတူဒူဘိုင်းသဘောတူညီချက် လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသစ်ကပြည်တော်ပြန်အများစုဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီနဲ့ Sharjah အတွက်။ ယူအေအီးမှရွေ့လျားနေသောသစ်ကိုလူတွေ။ သင့်ကျိန်းသေ သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲ ညာဘက်အမူအကျင့်၌တည်၏။ ဥပမာအားအာရဗီကမ်ဘာပျေါတှငျယဉ်ကျေးမှုအများကြီးကွာခြားသည်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ယူအေအီးအတွက်ဂျော့ဘ်ကြသည် အသစ်ကဧည့်သည်များအတွက်ဖွင့်လှစ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကအများကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ် လူနေမှုမြင့်မားကုန်ကျစရိတ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးနှုန်းကိုအယ်လ်ဂျီးရီးယားမှနှိုင်းယှဉ်ပိုများသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အယ်လ်ဂျီးရီးယားအတွက်ထက်အဘူဒါဘီအတွက်ပိုပြီးသုံးဖြုန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်, ကားများနှင့်ပြားချပ်ချပ်ပိုများသည်ပါဝင်သည်။ အတွက်ဒေသခံဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းများ ဒူဘိုင်း 254.26% ရှိပါတယ် ပိုမိုမြင့်မား ထက် အယ်လ်ဂျီးရီးယား.
အယ်လ်ဂျီးရီးယားအကြားအဓိကခြားနားချက် နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ ကျနော်တို့အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေကျပန်းလူတစ်ဦးယူလျှင်, ဥပမာလူနေမှုကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ကြသည်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ကယူလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီကနေကျပန်းလူတစ်ဦး။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုနှစ်ခုစလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေလူတစ်ယောက်လျော့နည်းစေသည်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ခအဘို့အခွင့်အလမ်းရှိစေခြင်းငှါ။ ကနေထိုအခါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူ Dhabကိုယ့်ကိုပိုပြီးငွေရှာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စျေးကြီးငှားနှင့်အဆင့်မြင့်ကုန်စုံနှုန်းထားများနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင် 591,153.18DZD န်းကျင်လိုအပ်မယ်လို့နှင့် 18,892.43AED န်းကျင်ရှိလိမ့်မည်။ နှင့် ကျနော်တို့နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဒူဘိုင်း နှင့်ချင်ပါတယ် ဘဝ၏တူညီသောစံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည် ယူအေအီးအတွက် သငျသညျအများကြီးပိုငွေရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျရှိနိုင်ပါသည် 200,000.00အတွက် DZD အယ်လ်ဂျီယား။ ငါတို့သည်အတွက်ငှားရမ်းယူဆလျှင် ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးများ.
အဆိုပါတွက်ချက်မှုလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်ငှားအညွှန်းကိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်အသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့်ဒူဘိုင်းတို့အကြားနေထိုင်နေ၏ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ လူနေမှုစရိတ်အတွက်အသားတင်ဝင်ငွေရရှိမှုယူဆ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ ကျိန်းသေ, သငျသညျဝငျငှေအခှနျအပြီးအများကြီးပိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကိုပြောင်းလဲ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်လုပ်အတွေ့အကြုံကို။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီနဲ့ Sharjah ၌တည်၏။
ဥပမာတစ်ခုမှာများမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်စျေးနှုန်းတွေထဲမှာ ဒူဘိုင်း။ သူတို့ကအများကြီးရှိပါတယ် ပိုမိုမြင့်မား ထက် အယ်လ်ဂျီးရီးယား။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့အစားအစာများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားစျေးနှုန်းများ 211.59% ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်ဆroceries စျေးနှုန်း ဒူဘိုင်း 63.28% ရှိပါတယ် ပိုမိုမြင့်မား အယ်လ်ဂျီးရီးယားဒေသခံစတိုးဆိုင်များတွင်ထက်။ ဖြစ်လျက်ရှိမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အသကျရှငျ၏ကုန်ကျစရိတ်အသုံးစရိတ်အများကြီးထင်ရပေမည်။ အထူးသဖြင့်ရက် အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏စတင်။ တစ်ဦးက start ရှာနေသူအလုပ်ရှာဖွေသူကျိန်းသေငွေအများကြီးသုံးစွဲသည်။
ဒါ့အပြင်အတော်ကြာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအခွင့်အလမ်းများကိုထားကြပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အယ်လ်ဂျီးရီးယားကုမ္ပဏီများက။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, အယ်လ်ဂျီးရီးယားကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လူတွေငှားရမ်းထားပါသည်။ တစ်ဦးရှိသည်ဖို့တကယ်တန်ဖိုးရှိဒါဟာဖြစ်ပါသည် ငှားရမ်းသူဒေသခံကုမ္ပဏီများသည်ကိုကြည့် အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေဒူဘိုင်းရန်။ ဒီလိုမျိုး, အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများအချို့အသုံးစရိတ်ကိုကယျတငျနိုငျအချို့အချက်များများအတွက်ကုမ္ပဏီများက shared နေရာထိုင်ခင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့လို့ပဲ။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရိုက်ထည့်ရန် သငျသညျအယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေအဘို့သင့်ဗီဇာလိုအပ်ချက်များစစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး entry ကိုကန့်သတ်ရှိခြင်းပြည်သူပြည်သားအချို့။ အဆိုပါအများစုဟာ အသစ်ကဧည့်သည်ဗီဇာ website ကိုစစျဆေးဖို့လိုအပ်.
ဝက်ဘ်ဆိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အဓိကအကြောင်းရင်း။ ယင်းနှင့်အတူစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည် အခြားအပြည်ပရှိစည်းမျဉ်းများအာဏာပိုင်များ။ နှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတို့အတွက်ထားရှိပြည်နယ်များစီမံခန့်ခွဲ။ သငျသညျရထိုက်ခွင့်ရှိပါသလား အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရိုက်ထည့်နည်း.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းအဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ 2018 အပေါ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေအဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။ အယ်လ်ဂျီးရီးယားကျွမ်းကျင်သူများဆိုက်ရောက်ဗီဇာ-အခမဲ့သို့မဟုတ်ဗီဇာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ 47 မှထို့အပြင်အစိုးရထောက်ပံ့ငွေ access ကို နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေများ။ ထိုအ Forbes မဂ္ဂဇင်းအယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ် 90th အနေအထားအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်လျှင်ခရီးသွားလွတ်လပ်ခွင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စကားပြောနေကြသည်။
သငျသညျယူအေအီးမှသွားလာရန်ကြိုးစားခဲ့နေတယ်ဆိုရင်။ သင်က Henley နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အညွှန်းကိန်းအရသိရသည်သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲသင့်တယ် အယ်လ်ဂျီးရီးယားဘို့ဗီဇာ။ ကျနော်တို့အယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစီမံခန့်ခွဲရသည်။ ဒါပေမဲ့ သင်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့သွားရောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ဗီဇာသတင်းအချက်အလက်များသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အယ်လ်ဂျီးရီးယားပြည်တော်ပြန်သူတို့ရဲ့စီမံနိုင်သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး။ တစ်ခုမှာ ဥပမာယူအေအီးဖြစ်ပါသည် အယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အက်ဘ်ဆိုက်။ သုံးပြီးသူကျွမ်းကျင်သူများအများစုဟာ အချို့ကမ်းလှမ်းမှုရတဲ့ဒီအလုပ် site ကို။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအွန်လိုင်းဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေလုပ်ဖို့လူတွေအကြံပေး။ မျှော်လင့်နယူးအလုပ်ရှာဖွေသူများ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေအတွက်ကူညီပေးနေ။ အထူးသဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအလုပ်ဆိုက်နှင့်။
ထိုမှတပါး, သင်အယ်လ်ဂျီးရီးယား join သင့်တယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ကွန်ယက်ကို။ အယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်သူကိုကတခြားပြည်တော်ပြန်အများကြီးအမြဲရှိပါသည်။ ကျိန်းသေ, သင်စဉ် အလုပ်အကိုင်အသုတသေနပွု အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဒါ့အပြင်လုပ်နိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအောက်ကပေါ်တယ်ပေါ်တွင် Sharjah အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့, Ajman နှင့်စော်ဘွား၏အခြားပြည်နယ်များ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ ဤအသောနေရာများအတွက်လျှောက်ထားရန်ကြိုးစား.
သင်၏လူမှုကွန်ယက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ အများကြီးရ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အတောက်ပသောသုတေသန။ Sharjah နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအစားသာဒူဘိုင်းရှာဖွေနေခြင်းထက်။ ဆိုတာသတိရပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလာပြီအဘို့ကိုသာအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ သင်သူတို့ထဲကတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့် မြို့တော်။
သင်တကယ်အလုပ်ရှာချင်ကြဘူးဆုံးဖြတ်ခင်မှာ? ရဲ့နောက်တဖန်အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှိုင်းယှဉ်ပါစို့နှင့် အလုပ်အတွက်ဒူဘိုင်း။ အယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစီမံခန့်ခွဲရန် wort ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်နေတာအဆိုပါရေတွက်ကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်အကြောင်းကို။ အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ပိုဆိုးအသုံးစရိတ်တစ်ခုမှာငှားခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အစားအသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သငျသညျအယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ရသောအခါ။ သင်ကအသုံးစရိတ်အဓိကပြဿနာဖြစ်လာမယ့်အနေအထား၌သင်တို့ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်။
အမ်းမရိတ်မှပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆန္ဒရှိနေသောလူများကို။ ကျိန်းသေမှာကြည့်သင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်ရှာဖို့ဘယ်လို။ အခက်ခဲဆုံးသဘောတူညီချက်အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, အခက်ခဲဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း့ပထမဦးဆုံးအလုပ်ရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအပြုသဘောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဗီဇာအလုပ်လုပ် status ကို pas ။ နှင့်အဆုံး၌, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်.
ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်မြောက်မြားစွာအလုပ်ရှင်များရှာကြ၏။ သင်တို့မူကားလာမယ့်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အနည်းငယ်လမ်းညွှန်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ သောကြောင့်အများကြီး၏ သငျသညျ UEA ပြောင်းရွှေ့မတိုင်မီသင်သိသင့်ပါတယ်အမှုအရာ.
Expat.com ဖြစ်ပါသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အခြားသောအရပ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့ခြိတျဆကျနိုငျသညျ။ အလုပ်ရှာဖွေနေကြသူအယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေအခြားလူများနှင့်အတူပြောဆိုပါ။ အဲဒီမှာကိုယ့်ဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအသစ်ပြည်တော်ပြန်များကြီးထွားလာနံပါတ်များ။ ကျွမ်းကျင်သူများပေါ်တယ်တွင်သင်သည်ရပ်ရွာအုပ်စုများမှကိုယ့်ကိုယ်ကို add နိုင်ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားအတွက်ပြီးသားနေသောပြည်သူပြည်သားအချို့။ သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ကူညီနိုင်ပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပြင်းပြင်းထန်ထန် expat.com အပေါ်မှတ်ပုံတင်ရန်လူတွေကိုအကြံပေးသည်။ သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့ပွောသငျ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရပြည်တော်ပြန်တွင်ကျယ်စွာသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေဒူဘိုင်း၌တည်၏။ ဒါ့အပြင်သင်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏အပြည့်အဝအသေးစိတ်မှတ်ပုံတင်ရန်လိမ့်မယ်သေချာအောင်နှင့် သင်၏ CV နှင့်ပရိုဖိုင်းကို database ကိုထည့်သွင်း.
အမှန်စင်စစ်လည်းလူသုံးအများဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားအလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအကြိမ်ပေါင်းများစွာအဖြစ်အမှန်စင်စစ်ဖော်ပြထားခြင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးဘို့ကောင်းသောက်ဘ်ဆိုက်။ သငျသညျအယ်လ်ဂျီးရီးယားတွင်နေထိုင်နေကြသည်နှငျ့သငျအယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ။ ဧကန်အမှန်ထို အလုပ်ပေါ်တယ်ကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ယူအေအီးအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေးအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် ပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျိန်းသေဧကန်စတင်သုံးစွဲဖို့သငျသညျအကြံပေးသည်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်တကယ်ကောင်းသောအလုပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ရှာဖွေနေကြသူအယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေ အလုပ်အတွက်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ခုအယ်လ်ဂျီးရီးယားအဖြစ်, သင်သည်သင်၏အလုပ်လျှောက်လွှာအစက်မရှိသောဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်ပြောပြတံ့သောအရာကိုအခြားသူများကို။ သာအကောင်းဆုံး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ပရိုဖိုင်းကို thru ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း။
ဒူဘိုင်းအယ်လ်ဂျီးရီးယားများအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (CV ကို) ရေးသားခြင်း
အတွက်အဓိကအရာတစျခု သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ တစ်ဦးကောင်း CV ကိုဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏နည်းပညာပိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကို၏။ အဆိုပါ CV ကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး CV ကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပစ္စည်းနှင့်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပြင်သစ်ထံမှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်ကိုကျော်လာပါတယ်။ အဆိုပါကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစ်ဦးတည်းသာရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်၏။ ရောက်ရှိဒူဘိုင်းအလုပ်ရှင်များနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းများအတွက်။ CV ကိုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုချင်းစီနဲ့အတူတူပါပဲရှိပါတယ်။ သာအကောင်းဆုံးတအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်အဓိပ္ပာယ်ကို CV ကိုပိုပြီးလေ့ဒူဘိုင်းအတွက်အသုံးပြုသည်ကတည်းက။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့ကိုအသုံးပြုမယ့်နေသည်။ သင်ဤဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးကိုသွားသင့်ပါတယ်။ ကျိန်းသေ, သင်ကူညီပေးရန် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကဒီမှာဖြစ်ပါသည်, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီ အယ်လ်ဂျီးရီးယားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့ဒူဘိုင်းတိကျတဲ့ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သုတေသနပြုစီမံခန့်ခွဲ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေစဉ်။ သငျသညျကိုယ်ရေးရာဇဝင်မြင်သာသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်အဆိုပါပြည်တော်ပြန်အများစုဟာ။ သင်သည်သင်၏အသစ်သောကောင်းသောဒူဘိုင်း CV ကိုရေးသားနေစဉ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ရန်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေအသစ်တခုကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့။ သငျသညျ CVs နှင့်ဖုံးအက္ခရာများကိုရေးသားဖို့ဘယ်လိုပေါ်ယေဘုယျညွှန်ကြားချက်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ပိုက်ဆံပေးချေရန်မလိုအပ်ပါဘူး လူကြီးမင်း၏ CV ကိုတက်ပြေးရဖို့။ Google နှင့် Bing မှခုနှစ်တွင်သင်တစ်ဦးအခမဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးနိုငျကွောငျးအခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များရာပေါင်းများစွာတွေ့လိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သငျသညျအကောင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုရှာဖွေကို Google ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည်လျှင် တစ်ဦးဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်ရှာဖွေနေ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် / CV ကို။ သင် ... သင့်တယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်ကိုသုံးပါ နှင့်သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုဒီမှာကပ်။ အမြဲတမ်းအကောင်းဒူဘိုင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်အတူစတင်ရန် !.
အကြောင်းကိုနိဂုံးချုပ်အဘို့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို အယ်လ်ဂျီးရီးယားသည်။ သင်ဘယ်မှာသင်သိရန်လိုအပ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဘို့ hit ရန်။ ဒါ့အပြင်သင်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသော CV ကိုရေးသားဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါ့အပြင်အဘယ်အရာကိုအယ်လ်ဂျီးရီးယားပင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုမီယူအေအီးရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒီလမ်းညွှန်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုသင်လိမ့်မည်ကြောင်းရှိခြင်းမျှော်လင့်ချက် သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အသေးစိတျမှတ်ပုံတင်ရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ တို့နှင့်ကြီးသောအပျြောအပါး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ ကုမ္ပဏီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘို့သင့်ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ သငျသညျယခုလမ်းညွှန်များရနိုင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်။